WARBIXIN: Real Madrid vs Liverpool- Waa Sidee Rekoodhka Los Blancos & Reds Ee Kulamadii Ay Hore Ugu Soo Wada Ciyaareen UEFA Champions League? Iyo Xusuusihii Gaarka Ahaa Ee Ay Isla Soo Mareen. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Real Madrid vs Liverpool- Waa Sidee Rekoodhka Los Blancos & Reds Ee Kulamadii Ay Hore Ugu Soo Wada Ciyaareen UEFA Champions League? Iyo Xusuusihii Gaarka Ahaa Ee Ay Isla Soo Mareen.
May 3, 2018 Mahamoud Batalaale
Liverpool ayaa xalay u soo baxday finalka tartanka kooxaha Yurub ee UEFA Champions League waxayna tani la micno tahay in Real Madrid ay wada ciyaari doonaan May 26,2018 waxayna haddaba ku balansan yihiin garoonka NSC Olimpiyskiy Stadium ee magaalada Kiev ee dalka Ukraine, waxayna labada kooxood sii bilaaban doonaan in ay midba tan kale daraasayso meelaha ay ku liitaan iyo halka ay ku xoogan yihiin.
Zinedine Zidane oo Real Madrid ka soo caawiyay in ay labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay Champions League ayaa markale doonaya in uu kooxdiisa koobkan u difaaco halka Jurgen Klopp oo markii ugu horaysay ee uu isku dayay in uu Liverpool kala soo muuqday Champions League u soo saaray finalka tartankan ayaa isna doonaya in uu soo celiyo taariikhdii Liverpool ee koobkan.
Waxaa hubaal ah in uu noqon doono kulan xiiso badan balse ka hor, shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa taariikhda kooxaha Real Madrid iyo Liverpool ee kulamadii ay Champions League ku soo wada ciyaareen, inta jeer ee ay koox kastaaba soo gaadhay finalka tartankan si la mid ah xusuuso ay isla soo mareen.
Waxa kale oo xogtan qayb ka noqon doona dariiqii ay Real Madrid iyo Liverpool xili ciyaareedkan u soo mareen finalka UEFA Champions League iyo waxyaabo kale oo ay hubaal tahay in aad xogtan ku jeclaysan karto.
Ugu horayn Real Madrid ayaa markii 16 aad soo gaadhay finalka UCL iyada oo 15 jeer oo hore ka soo ciyaartay, waxayna Madrid koobkan ku soo guulaysatay 12 jeer oo ka mid ah 15 kii jeer ee ay soo gaadhay finalka Champions League halka iyada oo saddex kulan finalka oo tartanka kooxaha Yurub ah soo guuldaraysatay.
Kulankii ugu danbeeyay ee final Champions League ah ee ay Real Madrid guuldaro la kulantay waxa uu ahaa sanadkii 1981 kii markaas oo ay isla Liverpool kala kulantay guuldaro 1-0 ahayd halka kulankii ugu danbeeyay ee finalka UCL ay 4-1 ku xaasuuqday Juventus dhamaadkii xili ciyaareedkii hore.
Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan darii adag u soo martay finalka Champions League waxayna dhinac iskaga soo dhigtay kooxaha PSG oo ay wadar 5-2 ah ku soo garaacday, Juventus oo ay wadar 4-3 ah ku soo jiidhay si la mid ah Bayern Munich oo wadar 4-3 ah kaga soo gudubtay halka guud ahaan xili ciyaareedkan ay Champions League soo guulaysatay 8 kulan, 2 kulan oo guuldaro ah iyo 2 barbaro ah ayaa sidoo kale loo soo diwaan galiyay.
Cristiano Ronaldo ayaa 15 gool ku hogaaminaya gool dhalina Real Madrid ee Champions League ay xili ciyaareedkan ka soo dhalisay waxayna guud ahaan soo dhalisay 30 gool halka iyadana laga soo dhaliyay 15 gool.
Dhinaca Liverpool waxay finalka tartanka kooxaha Yurub soo gaadhay markii 8 aad iyada oo 7 jeer oo hore soo gaadhay finalka tartankan waxayna soo guulaysatay 5 jeer oo ay koobkan soo qaaday halka 2 jeer ay guuldaro la soo kulantay. Markii ugu danbaysay ee ay finalka soo gaadhay waxay ahayd 2007 kii markaas oo ay AC Milan guuldaro kala kulantay.
Liverpool oo isreeb reebkii Champions League xili ciyaareedkan ka soo bilaabtay loolanka adag ayaa soo ciyaartay 12 kulan oo Champions League ah waxayna soo guulaysatay 7 kulan iyada oo hal guuldaro oo kaliya oo Roma ka soo gaadhay loo diwaan galiyay waxayna soo gashay 4 barbaro ah.
Liverpool ayaa 46 gool ka soo dhalisay Champions League xili ciyaareedkan waana rekoodh cusub oo ay dhigtay halka iyada 13 gool oo kaliya laga soo dhaliyay. Mohamed Salah iyo Roberto Firmino ayaa min 10 gool ku hogaaminaya Reds halka Sadio Mane uu haysto 9 gool waana saddexdii xidig ee abid hal koox ka soo wada jeeda ee 29 gool ka dhaliyay Champions League xili ciyaareed gudihii.
Haddii aan eegno dariiqa ay Liverpool u soo martay finalkii Champions League waxay ka soo bilaabtay kulamadii isreen reebka ee ay Hoffenheim wadarta 6-3 ah ku soo jiidhay waxayna group E kaga soo baxday kaalinta kowaad iyada oo wareegii 16ka 5-0 ku soo dhaaftay Porto.
Laakiin imtixaankii ugu adkaa ee ay Liverpool soo martay ayaa ahaa kulamadii Man City ee siddeed dhamaadka oo ay 5-1 ku soo xasuuqday City iyo waliba kulamadii AS Roma ee ay 7-6 ku soo dhaaftay. Liverpool ayaa gool dhalin waali ah soo samaysay intii uu xili ciyaareedkan Champions League socday.
Xusuusta Kulamadii Real Madrid Vs Liverpool Ee Champions league:
Real Madrid iyo Liverpool ayaa hore u soo wada ciyaaray 5 kulan oo tartanka kooxaha Yurub ah waxaana gacanta sare oo yeelatay Liverpool oo 3 kulan ka soo guulaysatay Real Madrid halka Real Madrid ay 2 jeer dhinaca dhulka u soo dhigtay Reds.
Labada kulan ee ay Real Madrid ka soo guulaysatay Liverpool waxay ku soo dhalisay 4 gool halka Liverpool ay saddexda kulan ee ay Madrid guulaha ka gaadhay ay ku soo dhalisay 6 gool.
Liverpool ayaa Real Madrid koobka Champions League ka qaaday xili ciyaareedkii 1980/1981 kii markaas oo uu Kennedy dhaliyay goolka kaliya ee ay Reds guusha ku gaadhay laakiin markale Reds iyo Los Blancos ayaa xili ciyaareedkii 2008/2009 kii isku arkay UEFA Champions League waana kulankii lugtii hore Bernbeu 1-0 guul ku soo gaadhay Liverpool iyada oo Benayoun uu dhaliyay goolka kaliya ee ay Reds guusha ku soo gaadhay.
Balse xusuustii ugu waynayd ee Real Madrid iyo Liverpool ayaa dhacday kulankii lugtii labaad ee Anfield markaas oo ay Liverpool 4-0 ku gumaaday Madrid iyada oo Torres uu goolka furitaanka dhaliyay halka Steven Gerrard uu laba gool gool raacsaday waxaana goolka afraad dhaliyay Dossena.
Markale Real Madrid iyo Liverpool ayaa UEFA Champions League isku arkay xili ciyaareedkii 2014/15 markaas oo ay Real Madrid marti iyo minanba ku garaacday Reds iyada oo kulankii Anfield ay Madrid 3-0 guul ku soo gaadhay Ronaldo ayaa goolasha daah furay laakiin Karim Benzema ayaa laba gool indhaha caalamka ku xaday.
Kulankii lugtii labaad ee Bernabeu markale Benzema ayaa goolka guusha u saxiixay Real Madrid.Halkan kaga bogo xogta kulamadii Liverpool iyo Real Madrid ee tartankan.
Heerkii Groupyada Champions League Ee 2014/15
Kulamadii Saddexaad: Liverpool 0-3 Real Madrid (Ronaldo 23, Benzema 30, 41)
Kulamadii Afraad: Real Madrid 1-0 Liverpool (Benzema 27)
Kulankii Lugtii Hore: Real Madrid 0-1 Liverpool (Benayoun 82)
Kulankii Lugtii labaad: Liverpool 4-0 Real Madrid (Torres 16, Gerrard 28 47, Dossena 88)
Finalkii European Cup 1980/81
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid iyo Liverpool ayaa markii 6 aad isku arki doona UEFA Champions League iyada oo waliba uu dhexdooda yaalo koobka dhegaha wayn ee Champions League. Haddii ay Real Madrid koobkan ku guulaysato waxa uu noqon doonaa koobkoodii 13 aad halka haddii ay Liverpool ku guulaysato uu noqon doono koobkoodii 6 aad ee Champions League.
Inta ka hadhsay finalka Champions league waxaanu insha Allah hadba idiin soo gudbin doonaa xogta iyo waxyaabihii ay labada kooxood ka soo mareen tartankan iyada oo wararka labada kooxood ay noqon doonaan kuwo si wayn loola socon doona gaar ahaan xaalada ciyaartoyda labada kooxood. La wadaag warbixinta asaxaabtaada kale ee baraha bulshada.